Nepali Rajneeti | डिभोर्स हुँदा महिलाले मनाए उत्सव, वेडिङ्ग ड्रेसलाई विस्फोट गरि उडाए !!
डिभोर्स हुँदा महिलाले मनाए उत्सव, वेडिङ्ग ड्रेसलाई विस्फोट गरि उडाए !!
बैसाख १८, २०७८ शनिबार १०६ पटक हेरिएको
अमेरिकाको टेक्सासकी एक महिलाले अनौठो तरिकाले आफ्नो विवाह खतम भएको उत्सव मनाएकी छिन् ।
उक्त महिलाले आफ्नो वेडिङ्ग ड्रेसमा विस्फोटक पदार्थ भरी आगो लगाई पड्काइ दिएकी छिन् ।
उक्त विस्फोट २५ किमि पर सम्म महशुस गरिएको थियो । ४३ वर्षकी किम्वर्ली सैन्टलेवेनले विवाह भएको १४ वर्ष पछि आफ्ना विवाह रद्द गरेकी थिईन ।
यही मौकामा उनले डिभोर्स पार्टी आयोजना गरेकी थिईन् । उक्त डिभोर्स पार्टीमा केक कात्ने तथा अन्य इभेन्टहरु सँगै वेडिङ्ग डे«सलाई विस्फोट गरि आगो लगाउने पनि इभेन्ट थियो ।
किम्वर्लीको वहिनी कार्लाले वताईन् की ९ नोभेम्वरमा डिभोर्सको प्रकृया पुरा भएको थियो । किम्वर्लीको अनुसार वेडिङ्ग डे«स एक झुठ भएकोले त्यसलाई जनाउने फैसला गरेकी थिईन् ।
उक्त अवसरमा किम्वर्लीको पिता र कार्लाको पनि त्यही थिए । उनिहरुले डिभोर्स सेलिव्रेट गर्ने यो एउटा सानदार तरिका हो भनेका छन् ।
पिँजडामा भोकभोकै थुनि राखेका ५० वटा निर्दोषी कुकुरहरुको वचाइयो ज्यान
५० वटा कुकुरहरुलाई पिँजडामा भोकभोकै थुनि राखेको अवस्थामा रेस्क्यू गरिएको छ । खवर हो साउथ कोरियाको ।
कोरियन एनिमल प्रोटेक्शन वर्कसले यहाँ कुकुरहरुलाई पिँजडामा वन्द गरेर राखेको अवस्थामा भेटाएका थिए । पछि ति कुकुरहरुलाई काट्नको लागि पठाउने गरेका थिए ।
कुकुरहरुलाई राम्ररी हेरचाह पनि गरिएको थिएन । उनिहरुलाई खाना पानी केही पनि दिइएको थिएन । ति कुुकुरहरुलाई एउटा किसानले आफ्नो फर्ममा राखेका थिए ।
पुलिस र जनावरका अधिकारी त्यहाँ आउने कुरा थाहा पाएर त्यहाँ ति किसान त्यहाँवाट भागेका थिए । ति कुकुरहरु एकदम डराएको अवस्थामा काँपी रहेका थिए ।
उनिहरुको हालत खराव थियो र मानिसहरुसँग डराएका थिए । कुकुरहरुको हालत यतिसम्म विग्रेको थियो कि उनिहरु उभिन पनि सकिरहेको थिएन ।
वेन्डी हेगिन्स (ह्यूमेन सोसाईटी इन्टरनेशनल) को डाईरेक्टरले भन्छन्, जव रेस्क्यू गर्ने टिम भित्र गए त कुकुरहरु अनुहार लुकाइरहेका थिए ।
यसवाट उनिहरु मानिससँग डराइरहेको स्प्रष्ट हुन्छ । उक्त संस्थाले यस्ता निमुखा जनावरहरुलाई वचाउने काम गर्छ । यो संस्थाले १७ वटा यस्ता फर्महरु वन्द गराईसकेका छन् । यस्ता फर्महरुले कुुुकुरलाई मारी त्यसको मासु सप्लाई गर्ने जस्तो गैर कानुनी काम गर्ने गर्छ । यसको लागि कोरिया सरकारले कानुन वनाउन गईरहेको छ ।